‘नियति’को नियत ! – Fewa Times
‘नियति’को नियत !
प्रकाशित मिति: June 16, 2017 5:20 pm
– हरिबोल काफ्ले
म साहित्यको सजर्क होईन । साहित्यक सिजर्नाहरुमा सकेसम्म नजर लगाउने केहि रुचि भने म भित्र पनि छ जस्तो लाग्दछ । मेरो विधा र विज्ञताको क्षेत्र अलग हो तर समकालिन साहित्य होस् वा अन्य विधा, लेखनमा प्रस्तुती दृिष्टकोणको मापन र आधार करिव करिव एउटै हुन्छ । वयरघारीको ‘नियित’को नियत के हो, त्यसको समिक्षाका लागि केहि जमर्को गरेको छु ।
प्रेम अनुभूती हो, तर यसको रुपहरुका विभन्न आयामहरु हुन्छन् । ‘नवजात शिशु–आमाको प्रेम, तन्नेरीहरुको वासना रुपी प्रेम, साथिभाईहरुको घनिष्टता, नाति–नातिनामाथिको वाजे वराजुहरुको भरोसा वा आमावावुको छोराछोरीमाथिको प्यार..’ ति सवै प्रेमहरु हुन् तर फरक अनुभुति र जिवन्त आयामका अभ्यासहरु हुन् । प्रेम आफैमा ठुलो महत्वको शब्द हो । तसर्थ कथामा विषय उठान विशेष छ र परिस्थितीको निमार्ण एवं परिघटनाहरुको तालमेल पक्ष रोचक वनाईएको छ ।
कथामा विषय प्रस्तुतीलाई दशर्नशास्त्रिय दृिष्टकोणले हेर्ने हो भने जवानी र आकषर्णको सौन्दयर्ता क्रमश कुण्ठा र आबेगमा रुपान्तरण भएको छ । तर वास्तिवक जिवनमा प्रेममा उत्कषर्ण जो कोहि एकजनासंग हुन्छ भने त्यसपछिको अवस्थामा अर्कोसँग कुण्ठा जिवन्त नवन्न पनि सक्दछ । साथै कथामा पात्रको चरित्र परिवतर्नको प्रयोग पनि छिटो छिटो देखिन्छ । अथार्त पटक पटकको प्रयास वा पिछा पछि मात्र महिलाले कुण्ठा व्यक्त गर्ने कोसिस अलि वढि व्यवहारीक देखिन्छ । साथै ‘प्रयोगशील– तत्व’ कथानक प्रस्तुतीमा केहि कमजोरी देखिन्छ । विवाहपछि जो कोहि महिला सजिलै चिया वा कफिको अफरमा आफ्नो पुरानो कुण्ठा पाखालेर दिल सफा गर्न तयार हुन्छन् भन्ने कुरा हाम्रो समाजमा विरलै देिखन्छ । त्यसको अतिरिक्त विवाहपछि आफ्नोसंग टाढा हुँदा अर्कोसँग विस्तारै ‘नयाँ’सम्वन्ध स्थापित हुने परम्परा भने विकसित हुदै गएको देखिन्छ ।
कथाले प्रेम मात्र नभई रोजगारीको चक्करमा खाडिमा यातना भोगीरहेका केहि निदोर्ष युवाहरुको ददर्नाक अवस्थालाई चित्रण गरेको छ । यो प्रतिनिधिमुलक चरीत्रले वास्तवमा भाग्यको सहानुभुति अथार्त ‘रमाजान’को समय खोजिरहेको हुन्छ । तर उसको प्रियतमको अवसरवादि नियतले एकातिर अज्ञात सुअवसर ‘रमाजान’पर्खि रहेको र अर्कोतिर आफ्नो वाँकि जीवनको लक्ष्यका लागि परप्रेमिको नाडि छामेको जस्तो पिन देखिन्छ । यो परिकिल्पत चरीत्र भने प्रयोगशील होला नहोला तर उत्कृष्ठ देखिन्छ ।
शव्दहरु चयनमा केहि विभेद छ । त्यो वाहेक प्रकाशन हुन पुग्ने सिजर्नामा शव्दहरुको शुद्धतामा ध्यानि दनु आवश्यक होला कि । ‘काठमाडौं महल’ को ठाउमा ‘काठमाडौं मल’ र ‘रमदान’को सट्टा विढ प्रयोग हुने शव्द ‘रमाजान’ किन छनौटमा परेन त्यसको जवाफ लेखकसंग होला कि ।
अन्त्यमा ‘उदेल्न’ लगायतका केहि शव्दहरु नेपालि शब्दकोषमा नै छैनन्, पाठकमा त्यसको शाब्दिक ज्ञान नभई त्यस्ता शब्दहरुको प्रयोग अनुिचत होला नि त । प्रयास सर्हानिय छ । समिक्षामा नकारात्मकतालाई वढि रुचाईन्छ किनिक त्यो वढि ‘प्रेरणा–स्रोत’ हुन्छ ।
छुटाउनु भयो कि राजु काफ्ले (बयरघारी) ले लेखेका सिर्जनाहरू